Ciyaartoyda aad arkeyso kama Dhaawacna Gacmaha ee……… – Gool FM
Ciyaartoyda aad arkeyso kama Dhaawacna Gacmaha ee………
(China) 25 Maarso 2018. Barnaamijyada ka baxa TV yada dalka Shiinaha ayaa bishii Janaayo laga sii daayay in dowladda ay balan qaaday inay Mamnuuci doonto Shabada jirka lagu sameysto ee ‘Tattoos’.
Kubbada cagta ayayna iminka sheekadaa u soo gudubtay kaddib markiii la arkay ciyaartoyda xulka Shiinaha oo gacmaha ku xirtay Bantaajooyin iyagoo qarinaya Tottoos kulankii saaxiibtinmo ay la yeesheen xulka Wales uu uu ka tirsan yahay Bale isla markaana uu macallinka u yahay Ryan Giggs.
Warsidaha AS ayaa warinaya in isla Shuruucdii uu Shiinaha ku soo rogay dalkiisa iminka lagu dabaqay kubbada cagta iyadoo ciyaartooy badan oo Shiinaha lagu qasbay inay qariyaan shabadahooda kulankii Wales ee China Cup.
Wararka ayaa intaa ku daraya in Dagaalka lagula jiro Tattoos ka ay qeyb ka tahay ilaainta qiimaha dadka Shiineyska ah isla markaana sare loogu qaado caafimaadka.
Iminka, ganaaxa ayaa u muuqda in lagu xadiday oo kaliya ciyaartoyda xulka qaranka Shiineeska mana kala cadda in isla ganaxaasi lagu dabaqi doono heerka kooxaha ee horyaalka Shiinaha.
Ciyaartooy waa wayn oo Yurub ka timid ayaa ka ciyaarta Chinese Super League kuwaa oo leh Tattoos aad u muuqda.
Gabar Guur u soo bandhigatay Mohamed Salah iyo laacibka oo siiyay JAWAAB cajiib ah
Edin Dzeko oo Xagaagan ku biiraya Chelsea....(Maxaa soo kordhay??)